November 2010 ~ ဂျပန်ပြည်မှပါးသောစာလွှာ . . .
မြန်မာတိုင်းမ်သို့ စာတစောင် (ဂျပန်နိုင်ငံသားလျှောက်ခြင်း)
ဒီနေ့ ဘလော့က ခင်ရတဲ့ မလသာညရဲ့ဘလော့ဂ်က ဆောင်းပါးတပုဒ်ကိုသွားလည်ဖတ်ပါတယ်။
သိပ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည် လင့်ခ်တွေအတော်များများကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားတာ
တွေ့ရပါတယ်။ အဲလိုဖြင့် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်ဆောင်းပါးသွားရောက်ဖတ်ရှုမိတဲ့အခါ အယ်ဒီတာကို မရေးပဲ မနေနိုင်လို့ စာတစောင် ရေးလိုက်မိပါတယ်။
အားလုံးလည်း စိတ်ဝင်စားလျှင်ဖတ်ရအောင် ဘလော့ဂ်မှာလည်းတင်လိုက်ပါတယ်။
ကျမဟာ မြန်မာတိုင်းမ်ကို လေးစားသလို နှစ်လည်းနှစ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂျာနယ်တစောင်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တဦးပါ။ ဒီလိုလေးစားသောဂျာနယ်မို့ ဂျာနယ်မှပါရှိသောသတင်းအချက်လက်
လွဲမှားမှုကို အချိန်ပေးပြီး ခုလိုစာမရေးပဲ မနေနိုင်ဖြစ်လို့ ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ယနေ့တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို အမှတ်မထင်ဖတ်မိပါတယ်။
လှူမှုဘ၀ရသစုံလင် ထဲမှ ဂျပန်မှာနေမယ်ဆိုရင် ဆိုသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။
( နောက် နိုင်ငံသားကိုယူရင် အလို အလျောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တာမျိုး မရှိဘဲ ဥပဒေအရ ရ၅ နှစ်လောက် နေပြီးရင် ကိုယ်က အလုပ်အကိုင် လည်း ရှိတယ် ဆိုရင် နိုင်ငံသားအဖြစ် လျှောက်ထားခွင့် ရှိပါတယ်။ဒီလို လျှောက်တိုင်းလည်း နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဂျပန်အစိုးရက လျှောက်ထားသူဟာ ဂျပန်နိုင်ငံ အတွက် အကျိုးရှိမရှိ၊ အန္တရာယ်ပေးနိုင်သလားစတဲ့ အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် ကအစ လိုက်လံ စစ်ဆေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ )
ပထမအပိုဒ်မှာ ရ နှစ်ခု ဖြစ်သွားပုံပေါ်ပြီး ၇၅နှစ် ဖြစ်နေတာတချက်ပါ။ ဒါဟာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့စာစီစာရိုက်အမှားမို့ အမှားပြင်ဆင်ချက်တောင်
ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်လျှင် ဖြစ်မှာပါ။ လူတွေလက်ထဲက ဂျာနယ်စာရွက်တွေ ပြန်လိုက်ကောက်ပြီးပြင်မရတာမို့ အမှားပြင်ဆင်ချက်နှင့်
လုံလောက်ငြား၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာအပေါ်မှာတော့ အမှားပြင်ရိုက်တာမျိုးလုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ နိုင်ငံသားကိုယူရင်အလိုအလျှောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ မှန်ကန်ပေမဲ့ မရှင်းလင်းပါဘူး။ ဗဟုသုတမကြွယ်ဝတာမို့ နိုင်ငံသားကိုယူရင်အလိုအလျှောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူး ဆိုတဲ့စာသားကို ဖတ်ရတဲ့အခါ နိုင်ငံသားကိုယူရင်အလိုအလျှောက်နိုင်ငံသားဖြစ်သော နိုင်ငံမျိုး ရှိပါသလားလို့ ဗဟုသုတအဖြစ် သင်ကြားပြောပြပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
ဒေါက်တာမောင်မောင်ရေးသားသော (တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ စာမျက်နှာ ၇၆)မှာ ဖတ်ရှုရတာကတော့ (
ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားတစ်ဦးနှင့်လက်ထပ်သောနိုင်ငံခြားသူတစ်ဦးသည် လက်ထပ်ပြီးနောက် တစ်နှစ်ကျော်လွန်လျှင် ၄င်းသည် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဘ၀ကို ခံယူလိုကြောင်းဖြင့် လျှောက်ထားတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ၄င်းသည်အိမ်ထောင်ရေးအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
ဂဟေဆက်မိပြီဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ငါးနှစ်ကြာနေထိုင်ရန်မလို။ တစိမ်းနိုင်ငံခြားသားထက် လွယ်ကူစွာပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဘ၀ကို ရယူနိုင်လေသည်။
ဟု ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်နိုင်ငံထက်စာလျှင် ဥပဒေအားဖြင့် စည်းကြပ်မှု သက်သာမှုရှိငြား မြန်မာနိုင်ငံသည်ပင် နိုင်ငံသားကို ယူပြီး တနှစ်ကျော်လွန်မှ နိုင်ငံခြားသားအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည် ဆိုသောအချက် ဖြစ်ပါသည်။
တတိယအချက် ကတော့ အထက်ပါ အရေးသားနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောခွင့်ပြုပါ။
ကျမလည်း ဂျပန်ရောက်တာ မကြာသေးသူမို့ ဗဟုသုတသိပ်မကြွယ်ဝတာမို့ ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ (ဂျပန်)နိုင်ငံသားဥပဒေကို သွားရောက်ဖတ်ရှုကြည့်တဲ့အခါ ဂျပန်နိုင်ငံသားနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသော နိုင်ငံခြားသားတဦးမှ ဂျပန်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဥပဒေများကို ယခုလို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံသားနှင့်လက်ထပ်ထားသည့်နိုင်ငံခြားသားတဦးက လျှောက်ထားလျှင် သက်မှတ်ထားသောအချက်များပါ။
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第 一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一 年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 ဂျပန်လူမျိုးဧ။်အိမ်ထောင်ဘက်ပြုထားသူနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး ၃နှစ်အထက် ဆက်တိုက်ဂျပန်တွင်နေထိုင်လာသောသူ တနည်းမှာ နေထိုင်သည့်လိပ်စာ ရှိခြင်း၊ ယင်းအပြင် လက်ရှိဂျပန်တွင်လိပ်စာရှိသူ နေထိုင်သူနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ တရားရေးဝန်ကြီးသည် ယင်းသူက ပုဒ်မ၅ စာပိုဒ်၁ရှိ ပုဒ်ခွဲ၁ နှင့် ပုဒ်ခွဲ ၂ ဖြင့် မကိုက်ညီငြား နိုင်ငံသားခံယူခြင်းကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသားဧ။်အိမ်ထောင်ဘက်ပြုထားသူ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပြီး လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည့်နေ့ရက်မှစကာ ၃နှစ်ပြည့်မြောက်ကျော်လွန်ပြီး၊ ယင်းအပြင် ဂျပန်တွင် တစ်နှစ်အထက် လိပ်စာရှိကာ နေထိုင်သူဖြစ်လျှင်လည်း ယင်းနည်းတူခွင့်ပြုနိုင်သည်။
ယင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဂျာနယ်ပါအထက်ပါကွင်းတွင်းရှိ သတင်းအချက်လက်ဟာလွဲမှားနေတာကို စိတ်မကောင်းစွာတွေ့ရှိရပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကအမြင်အားဖြင့်ပြောရရင် ဂျပန်ဧ။်နိုင်ငံသားခံယူနိုင်ခွင့်ရရှိခြင်းဟာ ယခုလိုဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားတာထက် လက်တွေ့မှာ ပိုမိုတင်းကြပ်တာ တွေ့ရှိရသော်ငြား ယင်းဥပဒေနှင့်တင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်ကိုက်ညီသူမှန်လျှင် သိပ်ကိုတိကျသေချာစွာ ခွင့်ပြုပေးတာမျိုး လည်း များစွာရှိပါတယ်။
တဖန် သာမာန်နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးမှ ဂျပန်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ဥပဒေများကို ယခုလို တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပုဒ်မ ၅ တရားရေးဝန်ကြီးသည် အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီသောနိုင်ငံခြားသားမဖြစ်လျှင်　နိုင်ငံသားပြောင်းလဲခွင့်ကိုမပြုနိုင်ပါ။
ပုဒ်ခွဲ ၁ ဂျပန်တွင် ၅နှစ်အထက် ဆက်တိုင်နေထိုင်လာခြင်း။ လက်ရှိနေထိုင်ဆဲဖြစ်ခြင်း။二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
ပုဒ်ခွဲ ၂ အသက်နှစ်ဆယ်အထက်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ဥပဒေနှင့်အညီ ပုံမှန်ဥာဏ်ရည်မီသူ ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့သူ မဖြစ်ရခြင်း။三 素行が善良であること。
ပုဒ်ခွဲ ၃ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်း။四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
ပုဒ်ခွဲ ၄ ကာယကံရှင် သို့ စားဝတ်နေရေးစရိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အိမ်ထောင်ဘက်၊ ယင်းအပြင်အခြားသောဆွေမျိုးမှအမွေဆက်ခံခြင်း၊ သို့ အတတ်ပညာဖြင့် စားဝတ်နေရေးစရိတ်တတ်နိုင်ခြင်း။五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
ပုဒ်ခွဲ ၅ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းမပြုပဲ တနည်းမှာ ဂျပန်ဧ။်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရယူခြင်းဖြင့် ယင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ဆုံးရှုံးသင့်သူ။六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
ပုဒ်ခွဲ ၆ ဂျပန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုသည့်ရက်နောက်ပိုင်းတွင်၊ ဂျပန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တနည်းမှာ ယင်းဥပဒေ အရဖွဲ့စည်းထားသောအစိုးရကို အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို ကြံစည်ခြင်း၊ တနည်းမှာ အဆိုပြုခြင်း၊ တနည်းမှာ ယင်းသို့ ကြံစည်ပြီး ယင်းသို့ အဆိုပြုသော အဖွဲစည်း ယင်းအပြင်အခြားအသင်းအဖွဲ့များဖြင့်ဆက်နွယ်ခြင်း၊ တနည်းမှာ ယင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းများ မရှိရခြင်း။
မြန်မာတိုင်းမ်ဟာ တိကျမှန်ကန်သော သတင်းအချက်လက်တွေနှင့်အတူ လူတွေလေးစားယုံကြည်ရသောဂျာနယ်ကြီးတစောင်အဖြစ် အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း
3, 12, 2010 ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်...ယနေ့ထိမည်သို့မျှအကြောင်းပြန်ခြင်းမပြုလာပါ။ :)))
3, 12, 2010 ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက်...ပုဒ်မ ၅ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟု မှားယွင်းရေးထားမိသည်ကို တရားရေးဝန်ကြီး ဟု ပြန်ပြင်လိုက်ပါသည်။ ပြောပြပေးသော မကောင်းမွန်ဝင်းအား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted in ဂျပန်မှာ,ဥပဒေရေးရာ
ငယ်ငယ်တုံးက ရပ်ကွက်ထဲမှာ စက်ဘီးစီးတာသိပ်ခေတ်စားတယ်။
ခြံနားမှာ ရဲစခန်းဝန်းကြီးဘေးက ကွက်လပ်ကြီးထဲ ခလေးတွေစုပြီး စက်ဘီးလာစီးကြတာ
သွားသွားငေးဖူးတယ်။ ဖေ့ကိုဂျီကျတော့ ဖေကိုယ်တိုင် ခြံထဲမှာ စက်ဘီးစီးသင်ပေးတော့
အဲလိုနဲ့ စက်ဘီးစီးတတ်သွားတယ်။ ဖေ၀ယ်ပေးတဲ့ စက်ဘီးလေးလည်း ၁လလောက်ပဲ
ကောင်းကောင်းစီးဖြစ်တယ်ထင်ပါရဲ့။ ကားတွေ အထူးသဖြင့်ဘတ်စ်ကားတွေ စိတ်ထင်သလို
မောင်းတတ်တဲ့ရန်ကုန်မှာ စက်ဘီးနဲ့ကားလမ်းပေါ်ကို စီးခွင့်မပြုတော့ အဲလိုနဲ့ စက်ဘီးလေးဟာ
အိမ်က စတိုခန်းလေးထဲမှာ သနားစရာပေါ့။ စက်ဘီးမစီးတာ ကိုယ်ရယ်မှမဟုတ်ပါဘူး။
ရန်ကုန်ကလူတွေ အများစု စက်ဘီးစီးလေ့မရှိကြဘူး။ ဘတ်စ်ကား တက်က်စီတွေသုံးတာများကြတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအရ ရထားက သိပ်အဆင်ပြေတယ်။
အချိန်သိပ်တိကျသလို မြို့ပတ်ရထားတွေက ၃မိနစ်ခြားတခါ ဆိုက်တာမို့ ဂျပန်တွေအချိန်သိပ်တိကျတယ်
ဆိုတာကလည်းမဆန်းပေဘူး။ သို့ငြား ရထားခ ဈေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စီးလိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး ယမ်း၁၂၀ ပေးရတယ်။ အသွားပြန် ၂၄၀။ ဝေးတဲ့နေရာတွေဆို ယမ်းထောင်
ကျော် ကျသင့်တာတွေရှိတယ်။ ကြက်သားရေခဲရိုက်ထားတာ တကောင်လုံးကို ယမ်း၅၅၀၊ ဘာဝယ်ဝယ်
၁၀၅ယမ်းဆိုင်မှာ လိုသမျှထွေကာလီကာတခု ၁၀၅ယမ်းမို့ တွက်လျှင် ဈေးမနည်းဘူးဆိုရမယ်။
ဘူတာကနေ အတော်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ နေသူတွေဆိုလျှင်လည်း ဘူတာထိရောက်ဖို့ ကားလို ၀န်လည်း
မများတဲ့ စက်ဘီးက လိုအပ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရောက်စ အံ့သြတကြီး ငေးမောဖူးခဲ့တာကတော့ စက်ဘီးတွေ...စက်ဘီးတွေပါပဲ။
ဘူတာကြီးတွေရဲ့ စက်ဘီးရပ်နားနေရာဟာ ကျယ်ပြောပြီး ထောင်နဲ့ချီတဲ့ စက်ဘီးတွေရပ်ထားလေ့
ရှိတယ်။ ဟိုနား သည်နား ဈေးဝယ်ပဲသွားသွား စက်ဘီးက သိပ်အဆင်ပြေတယ်။
စက်ဘီးတွေဟာ ကားလမ်းပေါ်မှာနင်းလေ့မရှိဘူး။ ဂျပန်က ကားလမ်းတိုင်းရဲ့နံဘေးမှာ မြန်မာပြည်က
တချို့နေရာတွေလို ပလက်ဖောင်းမြင့်မြင့်မဟုတ်ဘဲ ကားလမ်းနဲ့တညီတည်းနီးပါး ပလက်ဖောင်းလေးတွေရှိတယ်။ အဲသည့်ထဲမှာ လူတွေလည်းလမ်းလျှောက်၊ စက်ဘီးတွေလည်း
နင်းကြတယ်။ မီးပွိုင့်တွေကူးတဲ့အခါ စက်ဘီးကူးရန်ဆိုပြီး လူကူးမျဉ်းကြားဘေး စာရေးပြီး နေရာကျယ်
အလွတ်ထားပေးလေ့ရှိတယ်။ အဲသည်မှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဂျပန်ဓလေ့လေးကတော့ ကားတွေဟာ
စက်ဘီးတွေကို အထူးသတိထားပြီး အတူမောင်းရတဲ့(ပလက်ဖောင်းမကျယ်တဲ့)လမ်းကျဉ်းတွေမှာဆို
စက်ဘီးတွေကို ဦးစားပေးလေ့ရှိတယ်။ သို့ငြား စက်ဘီးတွေကလည်းသတိပြုမိတာနှင့် လမ်းဖယ်ပေးလေ့
ရပ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပြီးတော့ စက်ဘီးတွေဟာလည်း လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကို သိပ်ဦးစားပေးတယ်။
တခုခုလွန်သွားသလိုဖြစ်ရင် စုမိမဆန် ဆိုပြီး ခေါင်းလေးညွတ်ပြောတတ်တဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ အားနာရိပ်တွေ
ရှိတဲ့ ဂျပန်ဓလေ့ကို ကိုယ်ကချစ်တယ်။ သို့ငြား ယနေ့ခေတ်လူငယ်လေးတွေမှာ အဲလိုဓလေ့လေးတွေ
ပျောက်ကွယ်စ ပြုလာနေတာလည်း အတော်များများတွေ့ရတယ်။ သို့ငြား ဂျပန်စတိုင်က အလုပ်ထဲဝင်
တော့မယ် တက္ကသိုလ်တက်ပြီဆိုရင်ပဲ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကျင့်နှင့် အပြုမူတွေကို ပုံစံချပစ်တဲ့ လူမှု
ထုံးစံမို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီဆိုရင်ပဲ အားလုံးဟာ အမူကျင့်တွေ ပြောင်းလည်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။
အဲလိုနဲ့ဆက်ရရင် စက်ဘီးစီးခါစ သိပ်ကြောက်တတ်တယ်။ ဂျပန်ရဲ့ အများစုက ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လမ်းသွယ်လေးတွေထဲမှာ တိုက်မိမှာ သိပ်ကြောက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကားမောင်းတတ်ခါစ အခွေဆိုင်
သွားတော့ အနားရောက်မှ ဘေးကပ်ဖို့သတိရတော့ လန့်လန့်နဲ့အမြန်ကပ်ဖို့ ဘေးကားအကြည့်ကောင်းတာ လမ်းလယ်က အုတ်ခုံတွေကို ဆွဲခြစ်ခဲ့ပါရောလား။ အဲလိုရာဇ၀င်မို့။
စက်ဘီးစီးစ ခဏခဏ ရပ်လိုက်သွားလိုက်နဲ့ပေါ့။
ခုတော့ သူက စက်ဘီးသိပ်စီး သိပ်ပတ်တတ်တော့ ကိုယ်လည်း ကျင့်သားရသွားတယ်။
စက်ဘီးတွေက တပတ်ရစ်တွေလည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ အဟောင်းဆိုင်တွေမှာ ၃ထောင် ၄ထောင်ယမ်း
ခန့် တချို့ကောင်းလျှင် ယမ်း ၅ထောင်ကျော်ခန့်ပေါ့။ သို့ငြား အသစ်ဝယ်လျှင် အသက်သာဆုံးက ဆဲယူး
SeiYu ပါပဲ။ ယမ်း၇ထောင်ကျော်ခန့်ဖြင့်အသစ်စက်စက်ဝယ်လို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဂျပန်လာမည်ဆိုလျှင် စက်ဘီးကလေးတော့ စီးတတ်သင့်ကြောင်း။ စက်ဘီးစီးတတ်ထားလျှင်
ပုံများကို အင်တာနက်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
မြန်မာတိုင်းမ်သို့ စာတစောင် (ဂျပန်နိုင်ငံသားလျှောက...
ဒီတနှစ်နွေ ပူလှတယ် ..။ မရောက်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့အရပ် ...။ နေရှိန်ရှိန် .. ဖုန်ထိန်ထိန်နဲ့ ...။ ဘေးတိ၊ အနား...
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
လွှတ်တော်ကနေ စုံစမ်းရေး ကော်မတီဖွဲ့ခဲ့ရပြီး လူအများ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ဆိုသူ ဘယ်သူဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။ * ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ကလောင်နဲ့ ...
Number of View: 338 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။
ထောပတ်ကိတ် လုပ်နည်းကို video file နဲ့ရှယ်ထားတာလေးပါ3days ago